बुर्का लगाएर यसरी लगिँदै थियो ….यसरी जोगिइन् उनि ? २२ वर्षीय युवतीको बयान सुन्दा प्रहरी नै छक्क पर्यो -
Home News बुर्का लगाएर यसरी लगिँदै थियो ….यसरी जोगिइन् उनि ? २२ वर्षीय युवतीको...
बेचबिखनमा पर्न लागेकी एक युवतीको वीरगञ्जबाट उद्धार गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल र आफन्त नेपालको संयुक्त टोलीले नुवाकोट घर भएकी २२ वर्षीय युवतीलाई उद्धार गरेको हो ।
एक भारतीय युवाले प्रेम गरेर भारत लैजाँदै गरेको अवस्थामा नुवाकोटकी युवतीको उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल र आफन्त नेपालको संयुक्त टोलीले भारत जाँदै गर्दा वीरगजञ्ज नाकाबाट उनको उद्धार गरेको हो।
विवाह गर्नेसहितका विभिन्न प्रलोभनमा पारेर ती युवतीलाई भारततिर लैजाँदै गरेका एक भारतीय युवालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भारतको पूर्वी चम्पारणको भुलाही घर बताउने ३३ वर्षीय मुन्ना आलमलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
आलमविरुद्ध पर्सा जिल्ला अदालतमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दामा म्याद थप गरेर अनुसन्धान अघि बढाइएको पर्साका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बेलबहादुर पाण्डेले जानकारी दिए।
वीरगञ्ज महानगरपालिका-१७ अलौस्थित वैकल्पिक नाकाबाट ती युवतीलाई भारत लैजाँदै गरेको अवस्थामा आलम पक्राउ परेका हुन्। युवती बुर्का लगाई कसैले नचिन्ने गरी भारत लैजान लागेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीले रोकेको थियो।
आलमले ती युवतीलाई बारा घर भएका २१ वर्षीय अरविन्द रामसँग मिलेर सीमा पार गराउने तयारी गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ। आलमले आफू अविवाहित भएकाले विवाह गर्ने आश्वासन दिएर युवतीलाई झुटो प्रेमको नाटक गरेर बेचविखनको लागि भारत लैजान लागेको प्रहरीले जनाएको छ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख पाण्डेले दुई युवकमध्ये प्रत्यक्ष संलग्न देखिएकाले आलमविरुद्ध मानव बेचबिखन मुद्दामा म्याद थप गरेर अनुसन्धान शुरु गरेको जानकारी दिए । अर्को युवकको संलग्नताबारे अनुसन्धान भइरहेको उनको भनाइ छ । उद्धार गरिएकी युवती हाल आफन्त नेपालको संरक्षणमा छिन् ।
Previous articleविवाह गरेको एक महिना नपुग्दै बर्दियामा २ युवाको निधन, नहरवाट निकालियो शव (भिडियो हेर्नुस्)
Next articleहराएको ५२ वर्षपछि आफन्तको सम्पर्कमा आए गङ्गाबहादुर